Hawaii nọ n'ọnọdụ mberede ugbu a dị ka oke mmiri ozuzo na-efegharị agwaetiti
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii » Hawaii nọ n'ọnọdụ mberede ugbu a dị ka oke mmiri ozuzo na-efegharị agwaetiti
Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • ndị mmadụ • Resorts • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA
N'ihi iyi egwu nke oke oke mmiri ozuzo, enyela elekere ide mmiri maka agwaetiti niile ma a na-atụ anya na ọ ga-adị ebe ahụ ruo n'ehihie Mọnde.
Oke ifufe na-efe efe na-eji ifufe na-efe efe na oke mmiri ozuzo na-efesa agwaetiti Hawaii, ebe a na-atụ anya ọnọdụ oke mmiri ozuzo n'ebe dị elu.
Enyere ọnọdụ mberede maka Hawaii n'ụtụtụ Sọnde n'ihi oke idei mmiri na oke oke mmiri ozuzo.
Ọtụtụ n'ime steeti iri ise akọrọla nke ọma n'oge na-adịbeghị anya, yana akụkụ nke Hawaii n'oke oke ọkọchị. Mmiri ozuzo dị mkpa malitere na Fraịde, mana ọ nwere ike ịbụ nnukwu ihe dị mma.
Oké ọkọchị nke na-emepe emepe Hawaii ghọrọ ihe siri ike mgbe a kpọrọ nkụ nke ukwuu November. Honolulu, nke na-eru ihe dị ka sentimita 2.25 nke mmiri ozuzo na Nọvemba, wetara naanị 0.09 nke inch.